Mianara mankafy sy mankasitraka – Ministera Nahita ny Voninahitry Jesosy
Mianara mankafy sy mankasitraka
Tantara tena nisy naverina nadika, misy hafatra mahafinaritra!
Omaly hariva, nikarakara ny sakafonay i Neny, efa vizana tanteraky ny tontolo andro.
Narosony ny sakafo nony vita. Tsikaritro avy hatrany fa may ny laoka. Nijery tsara an’i Dada aho ary niandry azy hanao fanamarinana saingy tsy niteny izy fa nihinana ampitsikiana no nanontany ahy raha nahafinaritra ny tontolo androko. I Neny etsy andaniny nialatsiny taminy oe may tao ilay laoka fa variana kely izy. Tsara ary ilay izy hoy i Dada sady nihinana tsy nihambahamba ihany.
Nony avy nisakafo kelikely, samy namonjy ny efitra fatoriana izahay mianakavy. Fomban’i Dada no mandalo mirary torimaso mamy ho anay alohan’ny hatory.
Tsy naharitra aho fa nanontany azy :
– Dada! Tena tian’Dada izany tokoa ve ilay laoka may be teo?.
Noraisiny ny tànako ka hoy izy :
– Hitanao, tena mafy t@ reninao ny tontolo androny androany, tena vizaka izy nefa mbola tsy maintsy nikarakara ny sakafontsika. Ka nahoana indray isika no hanome tsiny azy. Ny laoka may azo nihafiana fa raha nanakiana teo dia mety nampalaelo sy nandratra ny fony »
Zao no hafatra:
Mianara mankafy sy mankasitraka izay ataon’ny olona na dia tsy tonga lafatra aza izany fa ilay ezaka sy ilay finiavany nanao ilay zavatra no raiso ho zava-dehibe. Aza adinoina fa tsy misy olona tonga lafatra!
Zarao mba ho hitan’ireo olona tsy mba mahay mankasitraka mihitsy fa dia manakiana foana rehefa misy zavatra tsy mety kely.
© Copyright 2019 - EFG IDF Media Team
Webradio Foi et Guérison, IDF